SK ကို Spanner, အမြင့် Precision SK ကို Spanner, SK ကို Collet တရုတ်နိုင်ငံ, SK ကို Collet Chuck Spanner ထုတ်လုပ်သူသည် Spanner
Home > ထုတ်ကုန်များ > SpannerSK ကို Spanner
SK ကို Spanner ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, SK ကို Spanner, မြင့်မားသော Precision SK ကို Spanner ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, SK ကို Collet သည် Spanner R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality SK10 Ball ကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း
SK ကို Lock ကို Spanner လိမ်ဖဲ့ခြင်း Spanner သတ်မှတ်မည်
အနက်ရောင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူ SK ဆောင်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်း Spanner
High Quality က Black အရောင် SK ကို Spanner High Quality က Black အရောင် SK ကို Spanner, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping...
High Quality SK10 Ball ကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း High Quality SK10 Ball ကိုလိမ်ဖဲ့ခြင်း, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping ၏လက်ကိုင်ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ကို...
SK ကို Lock ကို Spanner လိမ်ဖဲ့ခြင်း Spanner သတ်မှတ်မည် High Quality က Black အရောင် SK ကို Spanner, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping...
အနက်ရောင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူ SK ဆောင်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်း Spanner High Quality က Black အရောင် SK ကို Spanner, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping...
တရုတ်နိုင်ငံ SK ကို Spanner ပေးသွင်း
SK ကို Spanner, လိမ်ဖဲ့ခြင်းသော့ခလောက်, screw နှစ်ခု, အခွံမာသီးများနှင့်အခြား Threaded စွဲစေလက် tools တွေကို wrenching သြဇာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်းများသောအားဖြင့်သော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး clamping ၏လက်ကိုင်ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ကို aperture စုံ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါပေါင်းလိုက်သော Shanks အင်အားသုံးတစ်လျှောက်လည်ပတ်၏ညှနျကွား၏အသုံးပြုမှုကိုအသုံးချသည့်အခါသော့ခလောက်ဒါမှမဟုတ်အခွံမာသီး wrenching နိုင်ပါတယ်။
1. ပစ္စည်း: သံမဏိ
2. ခွန်အား: HRC40-45
3. နျ Standard: DIN6499
4. Precision: 0.008mm အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
6. က Surface ကိုပိုမိုချောမွေ့အဆင်ပြေ, Nice ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ခံစားရ
2. မြင့်သောကြိမ်နှုန်းသော induction တင်းမာ, ခိုင်မာသော 40-45 ။
3. မျက်နှာပြင်များတွင်လည်းကောင်း, electrophoresis ။
လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းဖွင့်လှစ် 4. လိမ်ဖဲ့ခြင်း။
SK ကို Spanner မြင့်မားသော Precision SK ကို Spanner SK ကို Collet သည် Spanner SK ကို Collet Chuck Spanner High Quality SK ကို Spanner
မြင့်မားသော Precision SK ကို Spanner
SK ကို Collet Chuck Spanner
High Quality SK ကို Spanner